eNasha.com - आची पनि काम लाग्छ !
आची पनि काम लाग्छ !
तपाइँले एउटा नेपाली लोक कथा सुन्नु भएको छ - छैन भने सुन्नुहोस् । एकादेशमा एउटा बूढा बा थिए रे ! तिनले जे कुरा पनि भविष्यमा काम लाग्छ भनेर पोको पार्दै दलिनमा घुसार्थे रे ! ओखतीदेखि बिगौती, हलेदोदेखि सलेदोसम्म उनले दलिनमा राखेका थिए । कतिसम्म भने एक दिन त आफ्नो 'आची' पनि काम लाग्छ भनेर घुसाएछन् । धेरै वर्षछि त्यो देशका राजा असाध्य बिरामी भएछन् र वैद्यहरुले के सुझाव दिएछन् भने कम्तीमा २५ वर्षपुरानो आची राजालाई खुवायो भने उनलाई निको पार्न सकिन्छ । उनको लागि जडी नै २५ वर्षपुरानो आची हो ।
राजाको स्वास्थ्यलाभका लागि देशको हर कुनामा यो खबर फैलाइयो । अब कसकोमा हुनु २५ वर्षपुरानो आची - तर जब ती बूढाले यो खबर सुने, हत्त न पत्त दलिनबाट दशकौँ पुरानो आची झिकेर राजाका तावेदारलाई जिम्मा लगाएछन् । वैद्यको सुसार र बूढाको आचीको नियमित सेवनले राजा निको पनि भए । यो देखेर ती बूढालाई राजाले आधा राज्य दिएर दोस्रो जन्म दिने बाबुझैँ सम्मान दिए अरे ! सुन्नेलाई सुनको माला.... । कथा सकिएको भने छैन है !
अब यो कथालाई थोरै सच्याएर यसरी पढ्नु भए हुन्छ- पाण्डा पाल्नु भएको छ भने उसको आचीलाई पेलेर एउटा स्तरीय कागज बनाउन सक्नु हुन्छ र त्यो कागजलाई तपाइँले बजारमा निकै महंगो दाममा बेच्न सक्नु हुन्छ । चीनमा यो सम्भावना देखिन थालेपछि अहिले केही अन्वेषणकर्ताले पाण्डाको आचीलाई पैसामा परिणत गर्न लागिपरेका छन् ।
सिचुआन प्रान्तस्थित चेङ्दु जायन्ट पाण्डा ब्रिडिङ बेसका अन्वेषणकर्ता लिआओ जुनले हालै आफ्नो अनुसन्धानबाट पाण्डाको आचीबाट उच्चस्तरीय कागज बनाउन सकिने दाबी गरेका छन् । गएको वर्षथाइल्याण्ड भ्रमणताका त्यहाँ हात्तीको आचीबाट कागज बनाइने गरेको पाइएपछि चीनमा पनि त्यो प्रयोग उनले पाण्डामाथि गरेका थिए । उनले भने- "ठूलो पाण्डाको आचीमा हात्तीकोभन्दा बढी 'फाइबर' पाइन्छ ।" त्यही फाइबर (रेसादार) आचीबाट कागज बन्ने उनको धारणा छ ।
चीनमा दिनपरदिन जीङ जिङ, के बी, या या तथा अन्य किसिमका पाण्डा लोप हुँदै गइरहेका छन् । तर ती लोपोन्मुख पाण्डालाई संरक्षण गरी तिनबाट स्तरीय कागजी रिममा परिणत गर्न सकिने लोभ लिआओले देखाइरहेका छन् । तर यो लोभ मात्र होइन, उनका अनुसार त अर्को वर्षभत्रमा आचीबाट निर्मित कागजहरु बजारभरि पाउन समेत सम्भव छ ।
"फाइदाका लागि मलाई यसो गर्ने मन त थिएन, तर यो फाइदा भन्दा पनि बढी खेर गइरहेको 'चिज'लाई सदुपयोग गर्न मात्र खोजेको हुँ", एसोसिएटेड प्रेसलाई लिआओले भने- "यसो गर्नु वातावरणीय हिसाबमा पनि मुनासिब छ । यसलाई हामीले घरायसी प्रयोग गर्न त सक्छौँ नै, उब्रिपाब्री कागजलाई बजारमा बेच्न पनि सक्नु हुन्छ ।"
पाण्डाको आची हेर्दै बालबालिकाहरु
लिआओले ४० वटा पाण्डालाई बाँसको खुराक गराउँदा दुइ टन (२ हजार केजी) आची गर्ने यी पाण्डाहरुबाट कति कागज उत्पादन गर्न सकिएला भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म निर्क्योल आइसकेको छैन । तर के आची भन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउने जनताले यसको स्वतन्त्र उपभोग गर्लान् त भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै टड्कारो छ । तर लिआओ भन्छन्- "कागज हेरेर कसैले पनि भन्न सक्तैन, यो पाण्डाको आचीबाट बनेको हो !"
यता उत्तरी थाइल्याण्डस्थित थाइल्याण्डको चिआङ माइ चिडियाघरले दुइ वटा पाण्डाका आचीबाट निर्मित विभिन्न रङका कागजहरु बजारमा बेच्न शुरु गरिसकेको छ । पाण्डाको आची धुइपखाली गरेर कागज बनाउन एक दिन पूरै लाग्ने गरेको छ ।
जनावर उपाय माया सुन्दरी सेलेब्रिटी गुगल विज्ञापन बलिउड भव्यता इन्टरनेट नग्नता फट्याइँ श्रीमानश्रीमती मूर्ख्याइँ उदेकलाग्दो परिस्थिति हलिउड मुद्दा मामिला कीर्तिमान उदारता